Posted by Tranquillus | Déc 12, 2021 | Shabakada
Boostada, warbixinnada mashruuca, daqiiqadaha iyo waraaqaha nooc kasta ah. Ma waxaad raadinaysaa tababar bilaash ah si aad u horumariso xirfadahaaga isgaarsiineed ee qoran?
Gaar ahaan shaqada, awoodda qorista dukumiintiyada tayada leh waxay kuu ogolaaneysaa inaad soo baxdo. Xirfadaha qorista ayaa ah kabaal aad u wanaagsan oo lagu gudbiyo sawirka xirfadda. Taas beddelkeeda, cilladaha meeshan ka jira waxay abuuri karaan sumcad karti-darro.
Haddii dhammaan dukumeentigaaga ay ku qoran yihiin Faransiis jaban oo aan ku habboonayn gebi ahaanba marka loo eego nuxurka iyo foomka. Aragtida ama dib u eegista aasaaska u ah soo saarista qoraal xirfadeed waa fikrad fiican.
Farsamooyinka qorista Diisambar 12, 2021Tranquillus
READ Qandaraaska Ka-qaybgalka Dhallinyarada ee dhalinyarada dillaaca - Martiqaad kooban oo saxaafadda ah
horeWarshada Gargaarka Caalamiga ah
Himilooyinka Horumarinta Dibadda iyo Joogtada ah: waxay daboolayaan caqabadaha!
Dhageyso si wax ku ool ah
Dimitri: "Markii aan noqday horumariyaha webka, waxaan helay luqad cusub"